अत्यन्तै खुसीको खबर – राति ११ बजेसम्म चल्ने गरी साझा यातायातले बिकशित देशको जस्तै अपांगमैत्री बस सञ्चालनमा : कुन – कुन ठाउँमा संचालन हुदैछ यो बस ? जान्नुहोस (फोटो सहित) « Sajha Page
अत्यन्तै खुसीको खबर – राति ११ बजेसम्म चल्ने गरी साझा यातायातले बिकशित देशको जस्तै अपांगमैत्री बस सञ्चालनमा : कुन – कुन ठाउँमा संचालन हुदैछ यो बस ? जान्नुहोस (फोटो सहित)
साझा यातायातले बुधबारदेखि राजधानीमा सेमी लो फ्लोर बस सञ्चालनमा ल्याएको छ। यो बस हरेक दिन राति ११ बजेसम्म सञ्चालन हुने साझाले जनाएको छ।
बिरामी तथा फरक क्षमता भएका व्यक्तिहरूलाई मध्यनजर गर्दै ठूला अस्पतालहरूको रुटमा यो अपांगमैत्री बस गुड्न थालेको हो। पाटन, अल्का, प्रसूति गृह, नर्भिक, नेपाल आँखा अस्पताल, वीर, कान्ति बाल, टिचिङ, गंगालाल अस्पताललाई समेट्ने गरी बस सञ्चालनमा आएको हो।
लगनखेल, त्रिपुरेश्वर, शहीदगेट, लाजिम्पाट, नारायणगोपालचोक हुँदै बस बाँसबारीसम्म पुगी सोही रुट हुँदै फर्कनेछ।
काठमाडौंका मेयर विद्यासुन्दर शाक्य, ललितपुर महानगरका चिरिबाबु महर्जन तथा साझाका अध्यक्ष कनकमणि दीक्षितले संयुक्त रूपमा बस सेवाको शुभारम्भ गरे।
सेवाको शुभारम्भ गरेपछि दुवै मेयर त्यही बसमा सँगै बसेर पुल्चोकदेखि बागदरबारसम्म पुगे। धुलाम्मे, खाल्डाखुल्डीयुक्त सडकका बाबजुद साझाले पहिलोपटक अपांगमैत्री बस सञ्चालनमा ल्याएको हो। बसको लागत ३५ लाख रुपैयाँ रहेको साझाले जनाएको छ।
बस सेवा शुभारम्भको अवसरमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्वोधन गर्दै दुवै मेयरले राजधानीको ट्राफिक व्यवस्थापन सुधारका लागि ठूला बसहरू अनिवार्य भएको बताए।
काठमाडौं महानगरका मेयर विद्यासुन्दर शाक्यले साझाका ठूला बसको संख्या कम्तीमा १ सयको संख्यामा पुर्याउन आफूले पहल गर्ने बताए। ठूला बसलाई प्राथमिकता दिँदै महानगर अघि बढ्ने उद्देश्यले नै साझासँग सहकार्य गरिएको शाक्यको भनाइ छ।
सार्वजनिक सवारीसाधनलाई व्यस्थित गर्न सकेमा मोटरसाइकल तथा निजी सवारी साधनको संख्या समेत घट्ने उनले बताए। शाक्यले चालक तथा सर्वसाधारणलाई ट्राफिक लेनको पालना गरी सभ्य बन्न आग्रह गरे।
त्यस्तै, ललितपुर महानगरका मेयर चिरिबाबु महर्जनले मोटरसाइकल र साना सवारीसाधनलाई निरुत्साहित गरी अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिए। ‘सार्वजनिक सवारी साधन व्यवस्थित भएमा पनि मोटरसाइकल वा कार किन्नुपर्ने बाध्यता समेत हुँदैन’ उनले भने।
साझा यातायातसँग महानगरले सहकार्य गर्दा स्थानीय बस व्यवसायीहरूले दबाब समेत दिएको उनले गुनासो गरे। ‘जब साझामा १ करोडको सेयर लगानी गर्ने सम्झौता भयो, मलाई बस व्यवसायीहरूको दबाब समेत आयो’ उनले भने।
कार्यक्रममा साझाका अध्यक्ष कनकमणि दीक्षितले योसहित ४७ वटा बस संचालनमा आएको जानकारी दिए। यातायात क्षेत्रमा साझाले ‘गेम चेन्जर’को भूमिका निर्वाह गर्न चाहेको दीक्षितले बताए।
साझालाई राजनीतिमुक्त बनाइनुपर्नेमा जोड दिँदै उनले भने ‘हामीलाई सरकारको नियमन आवश्यक छ, तर राजनीतिकरण नगर्नुहोस्।’
दीक्षितले सार्वजनिक सवारीसाधनमा उच्चतम मापदण्ड नहुँदा व्यवस्थित हुन नसकेको बताए। सबैले टिकट खरिद गरेर मात्रै यात्रा गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए।
साझाले आगामी दिनमा कार्डको व्यवस्था गरेर अघि बढ्ने योजना बनाएको छ। कार्ड सिस्टमको व्यवस्थाले पारदर्शिता बढ्ने उल्लेख गर्दै दीक्षितले हालको टिकट प्रणालीले पैसा चुहावटको संभावना समेत रहने औंल्याए।
यातायातलाई व्यवस्थित गर्न दुवै महानगर तथा अन्य नगरहरुसँग सहकार्य गरेर अघि बढ्ने दीक्षितले प्रतिबद्धता जनाए।
कार्यक्रममा उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकाल तथा राष्ट्रिय सहकारी संघका अध्यक्ष केशव बडालले ठूला बस थप्दै जानुपर्नेमा जोड दिए। – सेतोपाटीबाट